निर्भया हत्या मुद्दा : अपराधी विनयको उपचारको अनुरोध अदालतद्वारा खारेज | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more निर्भया हत्या मुद्दा : अपराधी विनयको उपचारको अनुरोध अदालतद्वारा खारेज
फागुन ११ गते, २०७६ - १४:५७
काठमाडौं । दिल्लीको एक अदालतले निर्भया सामूहिक बलात्कार तथा हत्याका एक अपराधी विनय कुमार शर्माको उपचारको अनुरोध खारेज गरेको छ । न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणाले विनयमा देखिएको मानसिक समस्या ठूलो विषय नभएको भन्दै उपचारको अनुरोध खारेज गरेका हुन् । न्यायाधीश राणाले विनयमा देखिएको मानसिक समस्या अस्पताल नै पठाउनु पर्ने अवस्थामा नरहेको समेत निर्णय सुनाए ।
अपराधी विनय कुमारका वकिलले गरेको निवेदनको आधारमा अदालतमा सुनुवाई भएको हो । विनयको तर्फबाट पेश भएको निवेदनमा उसको टाउकोमा गहिरो चोट भएको र मानसिक समस्याले ग्रस्त भएको भन्दै उपचारको लागि अनुरोध गरिएको थियो ।
अदालतले मृत्युदण्डको सजायँको कारण मानसिक समस्या देखिनु सामान्य कुरा भएको भन्दै महत्व दिएर उपचार गर्नुनपर्ने फैसला सुनाएको हो । अदालतले तिहार जेलमा रहेका डा. विवेक रस्तोगी र डा. आकाश नरादेको बयानलाई उल्लेख गर्दै उपचार आवश्यक नभएको बताएको हो ।
अदालतले सीसीटीभी फुटेजलाई पनि आधार मान्दै केहि दिनअघि वकील र परिवारसँग विनयको भेट सामान्य रहेको बताएको थियो ।
निर्भया सामूहिक बलात्कार र हत्या मुद्दाका चारै जना अपराधीलाई आगामी ३ मार्चमा फाँसी दिँइदैछ । अदालतले गत १७ फ्रेबुअरीमा नयाँ फाँसीको मिति जारी गरेको थियो । द वायरबाट
फागुन ११ गते, २०७६ - १४:५७ मा प्रकाशित